Sei Taili Kids - Ningbo Taili bhonasi Import uye Export Co., Ltd
NEI TAILI KIDS
8 zvikonzero nyore nei uchifanira kusarudza Taili Kids.
Speciality chikwata vagadziri
boka redu rakaumbwa muna 1994; kubvira ipapo hatina nokukurumidza vakatanga chikwata anopfuura 20 matarenda vagadziri avo dzidzira mukusika mushandisi-ushamwari, itsva zvinogadzirwa kuti vatengi rudo.
UTIZIRO ANOUYA FIRST
Uine motokari ose kugadzira muitiro, uye kuchengeteka zvinhu zvakadai kwakaenzanirana mapuranga uye 5-pfungwa chengetedzo mabhandi yedu strollers mwana, zvose Taili zvigadzirwa zvakaitika zvakaoma miedzo, akadai EN uye SGS chigadzirwa kuchengeteka nemiedzo, musangano zvepamusoro mitemo iri indasitiri.
zvigadzirwa dzedu dziri akagadzirwa Micheka kwoumbozha kuti vari ruoko-vakasarudzwa kubva chakanakisisa Whitehead Textile vagadziri. Ndivo nyoro kuti kubatwa, asi hunogara zvakakwana kuenda kure.
Tine unhu-vimbiso penyanzvi nechokwadi anoda yedu zvinodiwa zvakasangana uye kupfuura panguva ose chirongwa mukugadzira.
MUKURU Performance AT inokwanisika mitengo
Nakidzwa peunhu kutarisira kubva yakavimbika uye chakavimbika mugadziri, panguva mitengo zvisingagoni vakarova.
Tinoita kuti basa redu kuenda imwe maira nokuda makasitoma edu. Just kutora Kutarira chii nevamwe vanhu rinotii yedu Facebook peji, Blog ongororo uye musi Google+.
NYORE ushande STROLLERS
Vose strollers edu nokupinza mashandiro ane nyore-nedanga chinoita kuti kuvhura nokuvhara navo cinch (a rutivi vabereki vakabatikana rudo).
mapuranga yedu yakagadzirwa lightweight aruminiyamu kuti kuderedza hombe uye kurema strollers edu, nokuvaita nyore peta, pamwe vari nyore kuchengetera kwenyu muwadhiropu, hunde motokari yako, uye zvakakunakira kushandisa apo kukwira zvifambiso zvavose.